साँच्चै, कसरी? यो प्रश्न लगभग हरेक हाम्रो देश मोटरहाक्ने व्यक्ति bothers। र पनि स्वतः सेवा कर्मचारीहरु आफ्नो बेईमान सहयोगिहरु पर्याप्त कल्पना हुन सक्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न लिन असम्भाव्य छन्। त्यहाँ मात्र अधिकार व्यापारीहरु गर्न मानिन्छ सानो कार्यालय र पहुँच बच्न आवश्यक छ कि एक व्यापक विश्वास छ। तर, यो सबै भन्दा अधिक संभावना एक baseless दाबी छ। यसलाई जहाँ त्यहाँ छल्न बढी सम्भावना छ भन्न गाह्रो छ। हाम्रो देशमा, कुनै पनि व्यापार मा मुख्य भूमिका खेल्छ मानव कारक। एक बेइमान कर्मचारी र ठूलो र सानो प्राविधिक केन्द्र सेवा स्टेशनमा हुन सक्छ। त्यसैले तपाईंलाई थाहा, मास्टर सम्पर्क गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तर यदि यो सम्भव छैन, यो आवश्यक खातामा धोखा को सबै भन्दा साधारण तरिका लिन र तिनीहरूलाई गिर गर्न प्रयास छ। सबैभन्दा आदिम र, शायद, सबै भन्दा लोकप्रिय तरिका विफलता गम्भीरता बढाउनु छ। उदाहरण: तपाईं, सेवा गर्न आउँदै छन् निलम्बन मा एक Knock को उजुरी। केही साना गम लगाउने - मास्टर निदान र कारण दस्तक कि discovers। तर यस्तो सानो मरम्मत मा धेरै कमाउन र परिणाम रूपमा पूर्ण bulkhead सम्पूर्ण निलम्बन बिल। एक Knock गायब पछि यो मामला मा ग्राहक, सन्तुष्ट छ। लागत अनावश्यक बच्न क्रममा, निदान मा skimp छैन। धेरै सेवाहरूमा यो बनाउन।
अर्को तरिका - जो भागहरु, को प्रतिस्थापन लागि पैसा प्राप्त, वास्तव मा, कसैले परिवर्तन भयो। यस सजिलो छैन ट्रयाक राख्नुहोस्। तपाईं चेक-आउट सेवा मा जाँच हुनेछ शङ्का छैन, आफ्नो कार मा राख्न नयाँ वा स्पार्क। यस मामला मा, यो आफ्नै स्पेयर पार्ट्स किन्न, र यो कुरा servismenam विश्वास गर्न उचित हुन सक्छ। मरम्मत पछि, तपाईं आफ्नो पुरानो भागहरु फिर्ता गर्न चाहन्छु। तिनीहरूले हालियो कि क्षमा गर्नुहोस, तपाईं धोखा सम्भावना भनेर भन्छन्।
को निदान गर्न आफैलाई हतार छैन। एक पटक तपाईं आफ्नो अनुमानको साइट मात्र दोष बनाउन, एक अनुभवी मिस्त्री खुसीसाथ यो पनि यदि यो आवश्यक छैन प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
तर पनि यो मूल्य छैन हुन पनि शंकास्पद। अक्सर मर्मत अवधिमा दोष जो प्रारम्भिक निरीक्षण समयमा भेटिएनन्, पत्ता छ। यस मामला मा, मर्मत लागत स्वाभाविक घोषणा फरक हुनेछ। तर यो धोका छन् मतलब छैन।
यो बाटोमा प्राविधिक सहायता को सेवा सम्पर्क गर्न आउँदा सचेत हुन धेरै कठिन छ। त्यहाँ choosers हुन सक्दैन, र निदान र मरम्मत एक मास्टर पकड हुनेछ। तर आकस्मिक सेवा कल, तपाईं अतिरिक्त काम कुनै एक छैन सडक मा गर्न भनेर लगभग पक्का हुन सक्छौं। बरु, त्यसको विपरीत, यो मिसिन चाँडै कदम र सेवा गर्न जाने एक सिफारिस दिन सक्षम थियो भनेर पक्का हुनेछ। सायद बिरामी मास्टर केही पसल सिफारिस गर्नेछ वा आफ्नो ग्यारेज मा कार लिन प्रस्ताव। यहाँ पहिले नै सोचिरहेका लायक छ। प्राविधिक सहायता आवश्यकता सम्पर्क गर्दा एक नियम सम्झना गर्न: सबै भागहरु राम्रो छ भण्डारमा त्यहाँ यस्तो सम्भावना छ भने, पाठ्यक्रम, किन्न। विस्तार, तपाईं एक मिस्त्री प्रस्ताव, र जोbगर्न सकिँदैन / Y, र यो बिल्कुल इमानदार छ भने एक विशाल चिन्ह-अप बिना यो बेच्न, तर यो प्राप्त स्पेयर कम्तीमा एक चेक गर्न राम्रो छ यो छ।
यहाँ जब Automaster सामना पछि पर्छ भनेर सरल सावधानीहरु को सूची हो। निस्सन्देह, यो पूर्ण टाढा छ, तर fraudsters को कौशल विरुद्ध वास्तवमा panaceas अवस्थित छैन। हामी आफ्नो कार वास्तविक व्यवसायीक को हातमा हुन्छ भन्ने आशा। बाटोमा शुभकामना!
को स्टीयरिंग सापट पार के हो र यसले कसरी काम गर्छ?
समायोजन र कार्बोरेटर VAZ-2109 ट्युनिङ। को कार्बोरेटर VAZ-2109 कसरी समायोजन गर्न
कार कक्षाहरू। वर्ग "सी" कार
राम्रो के dampers राख्न?
वजन लागि खनिज ककटेल: समीक्षा
विज्ञान को मुख्य शाखा
Torzhok: रूसी वास्तुकला को आकर्षण
दुखाइ महसुस कसरी होइन? यो सम्भव वा छ?
Sciatica, उपचार लोक उपचार
बालिकाको कोठाको लागि केटीको लागि सही वालपेपर छनौट गर्नुहोस्
माछा र आलु पाइ
Lemsvul सामाग्री - यो के हो?
को 18 औं शताब्दीमा रूस विदेशी नीति